Tan-tsoroka teny Ankadivory :: Nahazo fanampiana mahavita herintaona ireo ankizy kambotin’ny CBA • AoRaha
Tan-tsoroka teny Ankadivory Nahazo fanampiana mahavita herintaona ireo ankizy kambotin’ny CBA
Nampihantain’ny vondrona Filatex tamin’ny sakafo sy kilalao isan-karazany ireo ankizy kamboty 60 tezaina sy beazina eny amin’ny toeram-panaovantsoan’Ankadivory Ambohimalaza na ny Cba, tamin’ny zoma lasa teo. Tafiditra amin’ny fankalazana ny iray volan’ny ankizy amin’ity jona ity ny hetsika nanome fifaliana sy tsiky ho an’ireo ankizy kamboty ireo rehefa nikarakaran’ny mpiara-miasa ao amin’iry vondrona iry ny sakafo (fanokafam-bavony, vary sy laoka akoho ary lasary) narahin’ny ody am-bava fo sy ny mofomamy. Nifalihavanja tamin’ny kilalao maro samihafa ihany koa ireo ankizy.
Nankasitraka an’izao tolo-tanana izao i Haja Rakotoniaina, Talen’ny Cba, indrindra nanoloana ny fanomezana vary 500 kilao sy menaka 80 litatra avy amin’ny vondrona Filatex izay mahavita taona ho an’ireo ankizy ireo. Mbola nozarain’ ireo mpiara-miasa akanjo, kiraro ary boky ihany koa aza ireto zaza kamboty ireto.
Mba mametraka ny toeran’ireo zaza kamboty ireo ho toy ny ankizy rehetra manana zo hifaly sy hobeazina ny fahazoany an’izao tan-tsoroka izao. Efa nisy rahateo ny fiaraha-miasan’ity vondrona ity tamin’ny Cba, toy ny fandraisany anjara tamin’ny fitaovam-panorenana isan-karazany niampy ny fanomezana boky sy kidoro sy ny sisa.
Fahatrarana fiara halatra
Disadisam-piarahamonina Mpianaka namoy ny ainy voatifitra teny an-dalana
Soamandrakizay Tsy miandraikitra ny olan’ireo mpivarotra ny komity mpikarakara
Fihoaram-pefin’ny mpitandro filaminana :: Miaramila 27 naiditra am-ponja noho ny famonoana telo lahy tao anaty fiara
Fandrindrana ny fifamoivoizana :: Natomboky ny polisy ny fampanarahan-dalàna an’ireo sarety sy posy